Barnaamijka Hello Somaliska – 04-03-2012 | Somaliska
Barnaamijka Hello Somaliska – 04-03-2012
Caawa waa markale iyo barnaamijkeenii Hello Somaliska. Barnaamijka waxaan caawa ku lafa guri doonaa mowduucyadii ugu waaweynaa ee aan qornay isbuucaan.
Waxaan doonaynaa in aan barnaamijka ka dhigno mid aad fikradihiina iyo su’aalihiina toos hawada uga soo gudbin kartaan. Mowduucyada aan maanta kaga hadli doono barnaamijka waxay noqonayaan.
1. ARIMAHA SOCDAALKA: Saadaaasha laanta Socdaalka oo filaysa in Soomaali badan ay yimaadaan Sweden 2012. Baarlamaanka oo ka dooday is waafajinta arimaha mideynta reeraha iyo sharciga Sweden. iyo gudoomiyaha degmada Katrineholm oo ka walaacsan Soomaalida la filayo in ay halkaasi yimaadaan.
2. ARIMAHA NOLOSHA: Soomaali xaflad u dhigtay gabadha u dhalatay reerka boqortooyada Sweden. Boqorka oo dalbaday in reerka biilkiisa loo kordhiyo. Iyo ragga Swedishka oo lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa ugu qurxoon aduunka.
3. Qodobada kale ee aad fikradiina ama su’aalaha aad ku darsan kartaan waxaa ka mid ah: Sirdoonka Sweden oo sheegay in ay isha ku hayaan dad Al-shabaab lagu tuhmaayo. Somaliska.com ma lacag baa laga dhigay? iyo arimaha bulshada sida barnaamijkeena Safarkaygii Islaamka.
Iyo mowduuceenii ugu dambeeyay ee bikrada laga iibsado hospitaalada Yurub.
Sidii caadada ahayd telefoonka barnaamijka aad uga qeyb qaadan kartaan waa 0722958251 (Comviq) Saacada waa kl. 18:00 (ama 6pm).
Wadada ugu fudud ee aad DNA isku cadeyn karto
Sweden faa’iido dhaqaale miyaa ugu jidha qaxootiga?
Bashir abass says:
March 4, 2012 at 11:41
Jimcale miyay so wici karan dadka dibada joogo,
March 4, 2012 at 11:52
Haa, waxaad ku daraysaa nambarka 0046722958251.
March 4, 2012 at 17:46
JIMCAALE SXBOOW QOFTI AAN LACAG UGU JURIN MALA SOO WICI KARAA ASII RABO INAW KAQEEYB GALO BARNAAMIJKA HOODI AXAD REEYSO AMA LYCKA MAHEEYSAA ADOO DAMOOHAAYO BUUGA NAXARIISTA
HADAAN QODOB KAMID KA DHIIBTO ARIMAHA DOODA GALABTA DUQA MAG KATRINEHOLM ADEER GÖRAN MAW MAGACIISA AHAAY INTOWSAN SHAQADA BILAABIN WALEE ARBETSLÖS MEEHEEYN XAWSA CUNI JIRAY MUGAW DHAHAA LAGU BIILIMAAYO CANSHUURTAANYA SOMALIDA TEEDA KALE CANSHUURTA MAGAALADA SWEDSH LEE MAA DHIIBO MASE AJAANIBANA WAA DHIIBAAN?
March 4, 2012 at 19:13
Sxb waan ka xumahay fariintaada waxaan arkay markii uu barnaamijka dhamaaday insha Allah waqtiga kale.
March 4, 2012 at 18:15
jimcale wad ku mahadsantahay hesaha macaan ee sodeyso
March 4, 2012 at 18:17
heebad waxad ku ledahay dhuulkaga hooyo wa ruun walahay ax ax ax
asc salaan aniga waxaan jeclaan laha in aad barnamijkan kan kuxiga aad kusoo qaadataan xaga shaqada ama somalida waxa ka hasyta dhinaca shqada idinkoo mahadsan thnks salaan all
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw alaa heestu macaana
March 4, 2012 at 20:01
anigu waxan leyahay sirdonka swedan qabta ee xabsi daain udira alshaab iyo kuwa xataa taageerada siiya waa kuwa nabaday qax dhibaato iyo dhimasho an wax macnaa ku qotominee mida labaas somaalida taqaan kuwaas xataa waxan ka codsanlahaa ineey ciidamada sirdonka cawiyaa i hate allshabaab walaahi
Deq darajo says:
March 4, 2012 at 21:39
TO” JIMCALE fadlan hadi.ey macqul tahay boga somaliska.com kusodar qeb lagu shergaren karo sida in qof lodiro ama logu diro
March 5, 2012 at 11:27
Wooow Ifka sidayda o kale ayad ogu riyaqday hesaha mcn e webka somaliska sodaayo,
Igaralli ahada xalay si kale ayan umashqulay,
March 6, 2012 at 16:04
muse: asc dhaman hawl wadenada gaar ahana jimcaale guud ahaana bulshada.sua ashayda jumcaale sxb anigu waxn haya su aal . waxan deganahay Sweden waxan kudhalay igu dhashay hal ilmo lkin ilaa iyo hada mahaysto wax sharci ah habayaratee waxayna jirtaa 7 bilood marka huspital lageynayo lacagta dhaqalaha xataa anaa bixiya. waana dhebel lacagtu aniguna waxan leyahay deganashaha wadanka lkin mahaysato hoyadeed wax sharciya oo wadankan kusabsan xaq umalaha miyaa ilmahaygu markas sharci waxan ahay jawab la aan .